Iintsimbi zomqala ze-H&M ongenakuziphosa kweli hlobo | Bezzia
USusana godoy | 17/06/2022 11:00 | Izinto ezenziwayo
Safika ngelo xesha lonyaka apho iimpahla zineentambo ezininzi kwaye apho ulusu luyi-protagonist. Ngenxa yoko, izalisekisa ngendlela ye nezacholo ezifana nezi ze-H&M inazo. Kuba kweli xesha lonyaka bathatha kakhulu, ngoko awuzukwazi ukumelana nayo yonke into esikulungiselele yona.
Ingqokelela yezimvo kunye nokugqiba okuya kunika ubomi kwinkangeleko yakho entle. Lixesha lokuba ukubheja kwezona ngcinga zoqobo kwaye sikhuphe incasa yethu eyona ilungileyo. Ngale ndlela, inkangeleko nganye esiyinxibayo ikwanika olo chuku lobuqu esiluthanda kakhulu. Kufuneka nje ukhethe uyilo lwakho oluthandayo.
1 Iintsimbi zomqala ezintathu kwi-H&M
2 Intsimbi yomqala yegolide eneentyantyambo ezincinci
3 Isitshixo esiphindwe kathathu kunye nependant yokutshixa
4 'Abahlobo abalungileyo' pendant
5 iiperile zomqala
Iintsimbi zomqala ezintathu kwi-H&M
Enye yeendlela eziphambili zexesha lonyaka yile. Yintsimbi yomqala enemisonto emithathu.. Kuba ukudibanisa i-pendants kuhlala kuyindlela entle yokunika inkangeleko nganye esiyinxibayo. Kodwa kule meko, oku kudityaniswa akuyimfuneko kuba i-necklace ngokwenene ineenguqu ezintathu kunye. Ngoko ke, ngamnye unokugqiba okukhethekileyo. Elona lide lenziwe litsheyini elihle kakhulu elinembasa encinci. Ngelixa okwesibini sifumana uluhlu lweebhola ezincinci ezihlobisa ukugqiba ngekhonkco lekhonkco elikhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olungaphezulu kunolugqibeleleyo lokunika intsusa kwisitayile sethu.
Intsimbi yomqala yegolide eneentyantyambo ezincinci
Kubonakala ngathi i-golden touch ingomnye wabalinganiswa abakhulu bexesha. Nangona ukuba uthanda isilivere, uya kuba neentsimbi zakho zomqala kunye nokugqiba. Okwangoku sihlala neyokuqala kodwa ngendlela ye-choker. Olunye ukhetho olusisiseko xa sithetha malunga nezixhobo. Ngoko ke, akukho nto ifana nokuhombisa intamo kunye nokukhanya kwegolide kunye nokugqibezela ngokulandelelana kwamaso amancinci njengeentyatyambo. Esona sitayela sibalaseleyo siya kuba seso sihamba kunye nombulelo kumbono onje. Ifanelekile kwiibhulawuzi zakho kodwa nakwiilokhwe ezininzi zasehlotyeni.
Isitshixo esiphindwe kathathu kunye nependant yokutshixa
Siyaqhubeka nombala wegolide kunye nenye yezo zigqibo esizithandayo. Sisiphumo sesithathu esikhoyo kwakhona. Nangona kule meko, sifumanise ukuba amatyathanga ngokwawo asuka kumakhonkco amahle kakhulu ukuya kwezinye zohlobo olujijelweyo, oluyimvelaphi. Kodwa okokuqala, sinazo zombini isitshixo kunye nelokhwe. Iinkcukacha ezimbini ezigqibeleleyo esele sizazi ziyancedisana kakuhle kwaye ngoku ziya kukwenza oko ngakumbi ezintanyeni zethu.
'Abahlobo abalungileyo' pendant
Ukuba ufuna ukwenza isipho esihle sasehlotyeni esiya kuhlala ubomi bonke, ngoko unomnye wemigexo oza kuyithanda, kwaye ininzi. Kaloku ukuba nabahlobo bokwenene kusoloko kubalulekile ebomini bethu. Ke, ukuba sinokuhlala siyinxiba njengembeko entanyeni yethu, nokuba ngcono. Sipendant esinentliziyo entle apho amagama athi 'Abahlobo abangcono' ingabadlali abaphambili efanayo. Ngaloo ndlela, unokuthatha omnye kunye nomhlobo osenyongweni okanye umhlobo, elinye iqela. Mayiphawulwe into yokuba nineemvakalelo ezifanayo!
Kubonakala ngathi sithetha ngeentsimbi zomqala ezintathu kwakhona, ezimbini zazo ezifanayo kodwa okwesithathu iya kuba ngumbono omtsha oya kuwuthanda kakhulu. Ngenxa yokuba ukongeza kwinto yokuba ezi zimbini ezifanayo zenziwe yintliziyo ephukile kwaye igcwele i-zircons, imbono iya kwisithathu kwi-discord leyo. yenziwe ngoluhlu lweeperile ezincinci. Ngaphandle kwamathandabuzo, abantu lolona khetho lubalaseleyo kwaye njengoko sibona, alukhe luphume kwisitayile. Ngoko simele sizithathele ingqalelo. Isitayela kunye nemvelaphi iya kukhanya entanyeni yakho. Yeyiphi kwezi necklace oyithanda kakhulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Izinto ezenziwayo » indibaniselwano yeentsimbi zomqala ze-H&M ongenakuphoswa
Indawo yobuqu kubudlelwane bothando